ဖြူစင်လှပတဲ့သွားတွေဖြစ်ဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ – Gentleman Magazine
ဖြူစင်လှပတဲ့သွားတွေဖြစ်ဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
ဖြူစင်လှပတဲ့ သွားတွေနဲ့ တောက်ပတဲ့အပြုံးဟာ သင့်ကိုပိုပြီး ကြည့်ကောင်းစေရုံသာမက အမျိုးသမီးတွေကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ပြောရရင် (၇၁)ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့သွားကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲကအမှတ်ပေးအကဲဖြတ်တတ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား ? မဟုတ်သေးပါဘူး။ သွားလေးတွေဖြူဖွေးတောက်ပမှုကြောင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းရရှိ (၅၈)ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရာထူးလစာတိုးဖို့ (၅၃) ရာခိုင်နှုန်း အခွင့်အရေးပိုများတယ်လို့လည်း လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒီတော့ သွားလေးတွေဖြူစင်လှပဖို့ အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။
သွားဖြူစင်ဖို့အတွက် သွားတိုက်ဆေးအကောင်းစားတွေ၊ ခံတွင်းသန့်စင်ဆေးရည်တွေနဲ့ အထူးကုသမှုတွေခံယူစရာမလိုပဲ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် (၉)ခုကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ မသုံးပါနဲ့။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေသန့်ရှင်းရာမှာ အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားသန့်ရှင်း ဖြူစင်ဖို့တော့ သုံးလို့မရပါဘူး။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ဟာ အရမ်းပြင်းလွန်းတာကြောင့် သွားရဲ့အပေါ်ယံကြွေလွှာတွေကို ပျက်စီးပြီး ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
(၂) အနက်ရောင်ချယ်ပါတဲ့ စားစရာတွေရှောင်ပါ။
ဘလူးဘယ်ရီတို့ ပဲငပိတို့လို စားစရာတွေမှာ အနက်ရောင်ချယ်တွေပါဝင်တာကြောင့် သွားတွေမှာ စွန်းထင်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနက်ရောင်ချယ်ပါဝင်မှုနှုန်းများတဲ့ စားစရာတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
(၃) အားဖြည့်အချိုရည်တွေကို မော့မသောက်ပါနဲ့။
ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ၀ိုင်တွေက သွားဖြူစင်မှုကို အဟန့်အထားဖြစ်စေနိုင်သလို အားဖြည့်အချိုရည်တွေကလည်း သင့်သွားတွေကို ၀ါသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိုရည်သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းမော့သောက်တာထက် ပိုက်နဲ့စုပ်သောက်မယ်ဆိုရင် သွားဖြူစင်လှပမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်ရန် (၆) ချက်
(၁) သွားတိုက်တံကို မကြာခဏလဲသုံးပါ။
သင်သုံးနေတဲ့ သွားတိုက်တံရဲ့အမျှင်လေးတွေ ကွေးလာပြီဆိုတာနဲ့ အသစ်လဲသုံးဖို့ လိုနေပါပြီ။ သွားတိုက်တံ မကောင်းတော့ရင် သွားတွေကို ကောင်းကောင်းသန့်ရှင်းပေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သွားတိုက်တံကို ၃ လ တစ်ကြိမ်လောက် အသစ်လဲသုံးပေးဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
(၂) လျှာကိုပါ သန့်ရှင်းပါ။
သင်လျှာမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ အများကြီးစုပုံနေနိုင်ပြီး အဲ့ဒီဘက်တီးရီးယာတွေက သွားတွေကိုပါ အရောင်ပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွားတိုက်တဲ့အခါ လျှာကိုပါတိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် ခံတွင်းနံ့ကောင်းစေရုံသာမက သွားတွေကိုပါ ဖြူနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှာကိုသွားတိုက်တံနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်ချက်တိုက်ပြီးတိုင်း ရေပြန်ဆေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ရေပြန်မဆေးပဲ နောက်တစ်ချက်ထပ်တိုက်ရင် ပထမအချက်မှာ ပါသွားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ပြန်ပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခြားနည်းလမ်းတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိလို့ စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။ ပန်းသီးရှာလကာရည် ၁ ဆ ကို ရေ ၂ ဆ နဲ့ရောပြီး ပလုပ်ကျင်းပေးရင်လည်း သွားလေးတွေ ဖြူဖွေးသန့်စင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကို အစိမ်းစားတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက သွားတွေဖြူစင်ဖို့ကိုပါ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းသီး၊ မုန်လာဥ၊ ပန်းဂေါ်ဖီတို့ဟာ သွားပေါ်က အစွန်းတွေကို ကျွတ်စေရုံသာမက သွားပိုးပေါက်ဖြစ်တာကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၅) ဂျယ်သွားတိုက်ဆေးကို အသုံးပြုပါ။
ဂျယ်လ်သွားတိုက်ဆေးတွေက ရိုးရိုးသွားတိုက်ဆေးတွေထက် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့မှုကောင်းတာကြောင့် သွားတွေကို နေရာလပ်မကျန်အောင်ဖြူဖွေးတောက်ပလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) လိမ္မော်သီးစားပြီးတိုင်း ပလုပ်ကျင်းပါ။
လိမ္မော်သီး၊ ရှောက်သီးတို့လိုမျိုး အချဉ်ဓာတ်များတဲ့ အသီးတွေက ဗီတာမင်စီ ရရှိဖို့စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ အက်စစ်ဓာတ်က သွားရဲ့အပေါ်ယံလွှာကို ပျက်စီးစေတာကြောင့် သွားမှာအရောင်တွေစွန်းထင်းလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးတွေစားပြီးတိုင် ပလုပ်ကျင်းပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ဖွူစငျလှပတဲ့သှားတှဖွေဈဖို့ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျမြား
ဖွူစငျလှပတဲ့ သှားတှနေဲ့ တောကျပတဲ့အပွုံးဟာ သငျ့ကိုပိုပွီး ကွညျ့ကောငျးစရေုံသာမက အမြိုးသမီးတှကေို ပိုဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရ ပွောရရငျ (၇၁)ရာခိုငျနှုနျးသော အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတဈယောကျရဲ့သှားကို ကွညျ့ပွီး စိတျထဲကအမှတျပေးအကဲဖွတျတတျကွတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါတငျပဲလား ? မဟုတျသေးပါဘူး။ သှားလေးတှဖွေူဖှေးတောကျပမှုကွောငျ့ အလုပျအကိုငျကောငျးရရှိ (၅၈)ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ ရာထူးလစာတိုးဖို့ (၅၃) ရာခိုငျနှုနျး အခှငျ့အရေးပိုမြားတယျလို့လညျး လလေ့ာတှရှေိ့ထားပါတယျ။ ဒီတော့ သှားလေးတှဖွေူစငျလှပဖို့ အရေးကွီးကိစ်စတဈခုဖွဈလာပါပွီ။
သှားဖွူစငျဖို့အတှကျ သှားတိုကျဆေးအကောငျးစားတှေ၊ ခံတှငျးသနျ့စငျဆေးရညျတှနေဲ့ အထူးကုသမှုတှခေံယူစရာမလိုပဲ လှယျကူရိုးရှငျးတဲ့ ဆောငျရနျရှောငျရနျ (၉)ခုကိုတငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ မသုံးပါနဲ့။
မုနျ့ဖုတျဆိုဒါက အိမျသုံးပစ်စညျးတှသေနျ့ရှငျးရာမှာ အစှမျးထကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သှားသနျ့ရှငျး ဖွူစငျဖို့တော့ သုံးလို့မရပါဘူး။ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ ဟာ အရမျးပွငျးလှနျးတာကွောငျ့ သှားရဲ့အပျေါယံကွှလှောတှကေို ပကျြစီးပွီး ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
(၂) အနကျရောငျခယျြပါတဲ့ စားစရာတှရှေောငျပါ။
ဘလူးဘယျရီတို့ ပဲငပိတို့လို စားစရာတှမှော အနကျရောငျခယျြတှပေါဝငျတာကွောငျ့ သှားတှမှော စှနျးထငျးစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အနကျရောငျခယျြပါဝငျမှုနှုနျးမြားတဲ့ စားစရာတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။
(၃) အားဖွညျ့အခြိုရညျတှကေို မော့မသောကျပါနဲ့။
ကျောဖီ၊ လကျဖကျရညျနဲ့ ၀ိုငျတှကေ သှားဖွူစငျမှုကို အဟနျ့အထားဖွဈစနေိုငျသလို အားဖွညျ့အခြိုရညျတှကေလညျး သငျ့သှားတှကေို ၀ါသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခြိုရညျသောကျခငျြတယျဆိုရငျ ဒီအတိုငျးမော့သောကျတာထကျ ပိုကျနဲ့စုပျသောကျမယျဆိုရငျ သှားဖွူစငျလှပမှုကို ထိနျးသိမျးထားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဆောငျရနျ (၆) ခကျြ
(၁) သှားတိုကျတံကို မကွာခဏလဲသုံးပါ။
သငျသုံးနတေဲ့ သှားတိုကျတံရဲ့အမြှငျလေးတှေ ကှေးလာပွီဆိုတာနဲ့ အသဈလဲသုံးဖို့ လိုနပေါပွီ။ သှားတိုကျတံ မကောငျးတော့ရငျ သှားတှကေို ကောငျးကောငျးသနျ့ရှငျးပေးနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ သှားတိုကျတံကို ၃ လ တဈကွိမျလောကျ အသဈလဲသုံးပေးဖို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
(၂) လြှာကိုပါ သနျ့ရှငျးပါ။
သငျလြှာမှာ ဘကျတီးရီးယားတှေ အမြားကွီးစုပုံနနေိုငျပွီး အဲ့ဒီဘကျတီးရီးယာတှကေ သှားတှကေိုပါ အရောငျပွောငျးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သှားတိုကျတဲ့အခါ လြှာကိုပါတိုကျပေးမယျဆိုရငျ ခံတှငျးနံ့ကောငျးစရေုံသာမက သှားတှကေိုပါ ဖွူနစေမှောဖွဈပါတယျ။ လြှာကိုသှားတိုကျတံနဲ့တိုကျတဲ့အခါမှာ တဈခကျြတိုကျပွီးတိုငျး ရပွေနျဆေးဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ ရပွေနျမဆေးပဲ နောကျတဈခကျြထပျတိုကျရငျ ပထမအခကျြမှာ ပါသှားတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှကေ ပွနျပါလာမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဘာမှထူးမှာမဟုတျပါဘူး။
အခွားနညျးလမျးတှေ အကြိုးသကျရောကျမှုမရှိလို့ စိတျညဈမနပေါနဲ့။ ပနျးသီးရှာလကာရညျ ၁ ဆ ကို ရေ ၂ ဆ နဲ့ရောပွီး ပလုပျကငျြးပေးရငျလညျး သှားလေးတှေ ဖွူဖှေးသနျ့စငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
အသီးအနှံနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျအမြိုးမြိုးကို အစိမျးစားတာဟာ ခန်ဓာကိုယျကနျြးမာရေးအတှကျသာမက သှားတှဖွေူစငျဖို့ကိုပါ အထောကျအကူဖွဈပါတယျ။ ပနျးသီး၊ မုနျလာဥ၊ ပနျးဂျေါဖီတို့ဟာ သှားပျေါက အစှနျးတှကေို ကြှတျစရေုံသာမက သှားပိုးပေါကျဖွဈတာကိုပါ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
(၅) ဂယျြသှားတိုကျဆေးကို အသုံးပွုပါ။
ဂယျြလျသှားတိုကျဆေးတှကေ ရိုးရိုးသှားတိုကျဆေးတှထေကျ စိမျ့ဝငျပြံ့နှံ့မှုကောငျးတာကွောငျ့ သှားတှကေို နရောလပျမကနျြအောငျဖွူဖှေးတောကျပလာစမှော ဖွဈပါတယျ။
(၆) လိမ်မျောသီးစားပွီးတိုငျး ပလုပျကငျြးပါ။
လိမ်မျောသီး၊ ရှောကျသီးတို့လိုမြိုး အခဉျြဓာတျမြားတဲ့ အသီးတှကေ ဗီတာမငျစီ ရရှိဖို့စားသုံးသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့မှာပါဝငျတဲ့ အကျစဈဓာတျက သှားရဲ့အပျေါယံလှာကို ပကျြစီးစတောကွောငျ့ သှားမှာအရောငျတှစှေနျးထငျးလာစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခဉျြဓာတျပါတဲ့ အသီးတှစေားပွီးတိုငျ ပလုပျကငျြးပါလို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
Previous: လက်တွဲဖော်အမျိုးသမီးကို လေးစားသမှုနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ဖို့
Next: ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ဆက်ဆံပါ (18+)